HomeHoryaalka GermalkaDaafaca Schalke Malick Thiaw oo ka jawaabay wararka xanta ah ee Xiisihiisa Liverpool
November 18, 2020 Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Wararka Ciyaaraha 0
Daafaca kooxda Schalke 04 Malick Thiaw ayaa qirtay inuu ku qanacsan yahay ku biirista Liverpool laakiin uu si buuxda diirada u saaran yahay inuu bandhig ka sameeyo Jarmalka.
Jurgen Klopp ayaa wajahaya dhibaato dhanka daafaca ah oo ka jirta Anfield iyadoo dooqa koowaad ee daafacyada dhexe Virgil van Dijk iyo Joe Gomez ay wajihi doonaan muddo dheer dhaawacyo.
Reds ayaa tan iyo markii lala xiriirinayay dhowr daafac dhexe ah – Kalidou Koulibaly iyo Dayot Upamecano – si ay u xalliyaan dhibaatadooda, halka Thiaw sidoo kale la rumeysan yahay inuu diirada u saaran yahay kooxda heysata horyaalka Premier League.
Si kastaba ha ahaatee, 19 jirkaan ayaa xaqiijiyay inuu ka go’an yahay Schalke ka dib markii uu qandaraaska u kordhiyay kooxda ka dhisan Bundesliga bishii July, isagoo u sheegay Schalke TV : “Dabcan waad ku faraxsan tahay marka ay kooxaha waa weyn kaa daba yimaadaan , laakiin dhab ahaantii way cadahay aniga ahaan inaan sii joogayo Schalke.
Sidoo kale luminta Van Dijk iyo Gomez oo dhaawacyo ah xilli ciyaareedkan waxay Liverpool eegeysaa Trent Alexander-Arnold , Andy Robertson , Fabinho , Jordan Henderson iyo Thiago Alcantara oo dhibaatooyin u gaar ah qaba halka Mohamed Salah dhowaan laga helay coronavirus.